Filtrer les éléments par date : dimanche, 21 octobre 2018
dimanche, 21 octobre 2018 18:39
Antsirabe: Maty nihantona tamin'ny tamboho ny zanaky ny mpanakanto Mami Basta
Ny reniny, handeha hivavaka maraina androany alahady 21 oktobra no nahita ity zanak'izy ireo faralahy, nifatotra fehikibo ny tendany nihantona mikiraviravy teo amin'ny tamboho.
Mbola nisy aina ilay tovolahy tamin'io nahitana azy io. Nifamonjena nentina namonjy hopitaly saingy tsy tana ny ainy.
Mbola nifampiresaka izahay mianaka halina, hoy i Mamy Basta. Tamin'ny 11 alina, taorian'ny vavaka hariva fanaon'ny fianakaviana vao samy namonjy efitranony avy natory.
Izaho no nanidy ny vavahady, hoy hatrany i Mamy Basta. Gaga izy ireo fa nivaha ny gadana manidy azy.
dimanche, 21 octobre 2018 18:29
Moramanga: Any amin'ny propagandy hatramin’ny Tale Jeneralin’ny FANALAMANGA
Niova angaha ny lalàna mifehy ny fifidianana filoham-pirenena ? Resabe eto Moramanga io amin’izao vanimpotoanan’ny fampielezan-kevitra izao, indrindra tamin’ny nahitan’ny maro ny Tale jeneralin’ny orinasam-panjakana FANALAMANGA nisalotra akanjo misy sary sy larahan’ny kandida faha-12 Hery Rajaonarimampianina, ary niatrika propagandin’ity farany, nizara moto ho an'ireo Ben'ny tanàna.
Tendrena amin’ny didim-panjakana ny Tale jeneralin’ny orinasam-panjakana. Hiarovana ny tsy fitanilana dia tsy tokony handray anjara amin’ny fampielezan-kevitra izy ireo, na dia maka fialantsasatra (congé) aza satria hisy fiantraikany amin’ny fihevitry ny olom-pirenena raha tsy hoe efa nametra-pialana, araka ny fanazavan'ny tomponandraikitra iray eo anivon'ny CENI Foibe.
dimanche, 21 octobre 2018 18:19
Kitra – Ligy Matsiatra Ambony: Voafidy ho filoha i Raby Myriame
Tontosa omaly tolakandro tao amin’ny Lapan'ny Faritra Matsiatra Ambony, rehefa nifanolanana amam-bolana maro, ny fifidianana ny filohan’ny Ligin’ny baolina kitra Matsiatra Ambony.
Enina ny mpifaninana, voafidy ho filoha nahazo isam-bato 5 Rtoa Raby Razafinambinina Myriame Eléonore, natolotry ny Zanakala, vavy tokana tamin’ireo mpirotsaka hofidiana ary vady andefimandrin’i Mamindraibe Rasolotafika, filohan’ny federasiona Malagasy kick-boxing.
Nanatrika fifidianana ny vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana (CNE foot-ball), solontenan'ny ministeran’ny tanora sy fanatanjahantena ary ny avy amin’ny foibem-paritry ny fanatanjahatena Matsiatra Ambony.
Sambany no vehivavy ny filohan’ny ligin’ny kitra Matsiatra Ambony. Raby Myriame no mandimby toerana an’i Rarison Hilarion.
dimanche, 21 octobre 2018 18:14
Toliara: Nifarana androany ny zaikabe nasionaly faha-20 ny FKTLM
Fotoam-pivavahana lehibe teto amin’ny Kianja Andaboly androany 21 oktobra no nanakatona ny zaikabe nasionaly faha-20 ny Fiombonan'ny Kristiana Tanora Loterana Malagasy (FKTLM) rehefa naharitra herinandro nanomboka tamin’ny 16 oktobra.
Nanamarika ny fotoana androany ny fizarana mari-pankasitrahana ho an’ireo namorona hira faneva sy sary famantarana.
Afaka telo taona indray ny zaikabe manaraka.
dimanche, 21 octobre 2018 16:08
Fampielezan-kevitra: Mitohy ny tsy fanarahan-dalàna
Ny Kandida tsirairay dia mahazo toerana voatokana hiantohan'ny CENI, hametahana afisy, mbola feno hatrany anefa ireo kandida mametaka izany eny amin'ny andrin-jiro, sy rindrin'olona tsy nahazoana alalana.
Misy mihitsy aza ny namorona panneau eny amin'ny arabem-panjakana, izay ny azy irery ihany no hita eo.
dimanche, 21 octobre 2018 12:00
Tolagnaro: Nitera-doza ny propagandin-dRajoelina
Nofaohin'ny sakana amin'ny haavo tsy azo ihoarana ireo olona nitaingina teo ambony kamiao niditra ny kianja Ampasamasay nanaovan'i Andry Rajoelina fampielezan-kevitra.
Olona iray namoy ny ainy, farafahakeliny fito naratra.
dimanche, 21 octobre 2018 11:54
Boriziny: Maloto ny rano, zara raha mandeha ny jiro
Hatramin'ny nanombohan'ny propagandy fifidianana filoham-pirenena no niainan'ny mponin'i Boriziny, Faritra Sofia io olana io.
Maloto noho ny rano amin'ny vovo ny rano amin'ny paompy, ahiana hiteraka aretina.
Zara raha mandeha adin'ny efatra isan'andro ny jiro, noho ny fahasimban'ny milina mpihary herinaratra efa ho 15 andro izay.
Mitaraina ny mpanjifa, miandrandra vahaolana haingana.
dimanche, 21 octobre 2018 11:42
FJKM: Mamarana ny fankalazana ny Jobily faha-50 taona
Fotoam-bavaka lehibe tanterahina eo amin'ny Kianjabe Mahamasina amin'ity Alahady 21 oktobra ity no hanakatona ny fankalazana ny Jobily faha-50 taonan'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ( FJKM) sy ny faha-200 taona nahatongavan'ny London Missionary Society (LMS) nitondra ny Filazantsara teto.
Naharitra herintaona ny fankalazana, nosokafana tany Antsiranana ny aogositra 2017. Tao Toamasina, vavahadin'ny Filazantsara, ny ivon'ny fankalazana roa volana lasa izay, dia izao tonga amin'ny famaranana izao.
Nisy omaly fitokanana trano lehibe, toeram-panofanana Mpitandrina FJKM, eny Ivato tsangambaton'ity Jobily ity.
dimanche, 21 octobre 2018 11:41
Toamasina: Efa tsy misy henatra intsony ny fizaram-bola
Hanao hetsika eo amin'ny bord Toamasina ny Kandida Andry Rajoelina anio tolakandro, ka nilaza mivantana ireo mpikarakara fa omena 5 000 ariary izay mazoto mitsena azy eny Ambalamanasy sy ho avy eny amin'ny bord avy eo. Tsy maintsy manao tee-shirt kosa anefa.